Northern Pacific Airways handefa fiaramanidina Boeing vaovao eo anelanelan'i Etazonia sy Azia
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Northern Pacific Airways handefa fiaramanidina Boeing vaovao eo anelanelan'i Etazonia sy Azia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fahazoana ny Boeing 757-200s no dingana voalohany amin'ny drafi-pandraharahana Pasifika Avaratra. Alohan'ny hidirany amin'ny serivisy, ny fiaramanidina dia handalo fanamarinana fikojakojana C-level manontolo an'ny Certified Aviation Services LLC (CAS), orinasam-pikojakojana, fanamboarana ary fanarenana (MRO) any San Bernardino, Kalifornia. Ny mpitatitra monina any Alaska dia mikasa ny hanohy hampitombo ny fiaramanidiny rehefa miomana amin'ny sidina mpandeha izy.
Manaiky ny hividy ny fiaramanidina enina voalohany an'ny Boeing 757-200 ny Northern Pacific Airways.
Ny Northern Pacific Airways dia nahavita ny fifampiraharahana mba hihaonana amin'ny ampahany amin'ny takiana fitaterana voalohany.
Ny fiaramanidina Boeing 757-200 vaovao voalohany ao anatin'ity fividianana ity dia halefa any amin'ny Northern Pacific Airways avy hatrany,
Tamin'ity herinandro ity dia nanaiky ny hividianana fiaramanidina enina voalohany - Boeing 757-200s i Anchorage, Northern Pacific Airways, izay zanaky ny FLOAT Alaska LLC. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia nahavita ny fifampiraharahana mba hihaonana amin'ny ampahany amin'ny takiana fitaterana voalohany. Ny fiaramanidina voalohany ao anatin'ity fividianana ity dia hatolotra avy hatrany.
Ny seranam-piaramanidina dia mikasa ny hanolotra serivisy eo anelanelan'ny teboka any Etazonia sy Azia, amin'ny alàlan'ny Anchorage, Alaska.
Ny fahazoana ny Boeing 757-200s no dingana voalohany amin'ny Pasifika AvaratraDrafitra fandraharahana. Alohan'ny hidirany amin'ny serivisy, ny fiaramanidina dia handalo fanamarinana fikojakojana C-level manontolo an'ny Certified Aviation Services LLC (CAS), orinasam-pikojakojana, fanamboarana ary fanarenana (MRO) any San Bernardino, Kalifornia. Ny mpitatitra monina any Alaska dia mikasa ny hanohy hampitombo ny fiaramanidiny rehefa miomana amin'ny sidina mpandeha izy.
Ny tsara indrindra an-dakilasy Boeing 757-200 dia ampiasain'ny maotera turbo 36-600 Rolls-Royce RB211 izay milina turbo milanja 255,000 lbs. Ny fiaramanidina dia afaka mitondra mpandeha mihoatra ny 200 mankamin'ny sidina alehany tsirairay, miaraka amin'ny 3,915nm / -7,250km isan-karazany. Ny fiaramanidina mitanjozotra tokana dia tsy mandany vola lavitra raha manidina noho ny mifanila volo aminy, nefa manana sakany lehibe kokoa noho ny fiaramanidina hafa mitovy habe aminy. Nandritra ny faharetan'ny programa famokarana, Boeing 1,049-757 mahery no natolotra. Ny fiaramanidina dia mety tsara amin'ny sidina lavitra, lavitra, ary manana toerana ampy handraisana ny entan'ny mpandeha tsirairay.
"Pasifika Avaratra reharehantsika ny mampahafantatra ireo fiaramanidina matanjaka ireo ho toy ny fototry ny fiaramanidintsika ", hoy i Rob McKinney, Lehiben'ny Executive Executive Pacific Pacific. “Ny Boeing 757-200 dia hanampy antsika hahatratra ny tahiry sy ny fahombiazan'ny asa ary manome ny mpanjifanay traikefa an-dia mahafa-po. ”
Ny Northern Pacific Airways (NP) dia mikasa ny hanolotra sidina eo anelanelan'ny isa any Etazonia sy ireo teboka any Azia Atsinanana amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ted Stevens any Anchorage, Alaska.
FLOAT Alaska LLC, tarihan'ny CEO Rob Robininney, dia orinasan-dRavn Alaska, Northern Pacific Airways, FlyCoin, ary orinasa hafa monina any Alaska.